विश्वका शक्तिशाली कम्युनिष्ट शासक पुटिनकी ३१ वर्ष कान्छि ‘गर्लफ्रेण्ड’, दिन्छन् १२ अर्ब कमाउने बाटो – Khabaarpati
December 1, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on विश्वका शक्तिशाली कम्युनिष्ट शासक पुटिनकी ३१ वर्ष कान्छि ‘गर्लफ्रेण्ड’, दिन्छन् १२ अर्ब कमाउने बाटो
काठमाडौं । विश्वको शक्तिशाली देशहरुको दोस्रो स्थानमा रहेको रुसका राष्ट्रपति अहिले आफु भन्दा ३१ वर्ष कम उमेरकी महिलासँग प्रेममा रहेका छन् । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनकी कथित गर्लफ्रेन्डबारे यसपटक गम्भीर खुलासा भएको छ ।
उनले हरेक वर्ष लगभग १२ अर्ब रूपैयाँ कमाई गर्दै आएकी छिन् । उनी क्रेमलिनलाई सहयोग पुर्‍याउने मिडिया कम्पनीकी मालिक हुन् । पुटिनको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन तर हालै लीक गरिएको रेकर्डमा यो खुलासा भएको हो । अलिना काबेवा पुटिनको नजिकको एक अरबपति युरी कोभालचुकले तलब दिने गर्दै आएका छन् ।
पेशाले जिमनास्ट अलिनाले सन् २००१ मा पुटिनलाई भेटिन् । त्यतिखेर उनी मात्र १८ वर्षकी थिइन । क्रेमलिनले दुबै बीचको सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । पछिल्लो महिना, एक मित्रले अलिना जुम्ल्याहा बच्चाहरूलाई जन्म दिए पछि सबै साथीहरूसँगको सम्पर्कबाट टाढा भएको दाबी गरेका थिए ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
सन् २००४ मा ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जितेकी अलिना पछि हराइन् । विशेष श्रोतहरुका अनुसार उनी आज दर्जनौं गुणा बढी कमाई गर्दैछिन् । भ्रष्टाचार विरोधी प्रकाशनका अनुसार राष्ट्रिय मिडिया समूहले निर्देशकहरूको वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दैन । कम्पनीले यसमा मिडिया क्वेरीलाई कहिले पनि जवाफ दिएन र अलिनाको आम्दानीको बारेमा पनि केहि थाहा छैन ।
संघीय कर सेवा को डेटाबेस अनुसार, उनको आधिकारिक आय १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रहेको छ । उनको नेशनल मिडिया ग्रुपका धेरै आउटलेटमा सेयर छ । साथमा सरकारी सब्सिडी पनि रहेको छ । उक्त रिपोर्टले उनको तलब रुस उर्जा कम्पनी रोसेनफ्टको अध्यक्षका रूपमा झण्डै ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन पूर्व जर्मन चान्सलर जेरार्ड श्राडरको वरिपरि रहेको बताइन्छ ।
रिपोर्टले प्रश्न गर्यो कि बल र हूपसँग काम गर्ने जिम्नास्ट रूसको सबैभन्दा ठूलो मिडिया होल्डिङ्गको प्रमुख कसरी भइन् ? अलिनालाई कसरी राष्ट्रपतिको साथिको कम्पनीले यत्रो रकम तलबका रुपमा किन तिर्दैछ ? अलिना र पुटिन बीचको सम्बन्ध के हो ? यी सब कुराहरु लुकाएर राखिएको छ । जिम्नास्ट नजिकका व्यक्तिहरू जहिले पनि सफल व्यक्तिहरूबाट केहि प्राप्त गर्छन् । देशमा औसत वार्षिक आय ९ लाख २४ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै हुन्छ ।
क्रेमलिनले पुटिन र अलिना बीचको सम्बन्धलाई अस्वीकार गरेको छ । सन् २०१४ मा पुटिनले आफ्नी श्रीमती लुडमिलासँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए तर सञ्चारमाध्यमहरुले उनको निजी जीवनको बारेमा कम मात्र चर्चा गरेका थिए ।
उनको साथीहरु वा परिवार को बारेमा जानकारी नै हुँदैन । पुटिनका अनुसार हरेक मानिसहरुको जस्तै उनको पनि जीवन निजी छ । उनी कसैलाई पनि यसमा हस्तक्षेप गर्न दिदैनन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
टिकटक र पब्जी तथा फ्रि–फायरमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश